Ilaaliyeyaasha kursiga ugu fiican eeyaha: daryeel gaarigaaga! | Eeyaha Adduunka
Susana godoy | 23/09/2021 12:14 | Qalabka eyga
Waxaan jecelahay inaan eeydayada la samayno dhammaan noocyada safarada. Sidaa darteed, waxa ugu raaxada badan ayaa ah in lagu qaado baabuurka, in kasta oo tan ay tahay inaan si taxaddar leh u ilaalino maxaa yeelay sidaan ognahay, eeyadu ma joogsan doonaan xitaa haddii ay sidaas sameeyaan, hubaal waxay kuraasta oo dhan ka buuxin doonaan dhogor. Sidaa darteed waxaan u baahanahay a ilaaliyaha kursiga gaariga eeyaha.
Mid ka mid ah aaladaha aasaasiga ah ee nolosha noo fududeeya, inta aan daryeelno xaaladda gaadhigayaga. Haddii ay yihiin dhammaan faa'iidooyinka! Maanta waad ogaan doontaa iyaga, laakiin sidoo kale wax walba waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato ilaaliyayaasha kursiga baabuurka, sababtoo ah waxaan rabnaa inaad mar walba doorato midka aad u baahan tahay.
1 Ilaaliyeyaasha kursiga ugu fiican ee baabuurta
2 Ma loo baahan yahay in la keeno ilaaliye kuraasta markaan eeyga baabuurka ku wadno?
3 Faa'iidooyinka isticmaalka daboolka baabuurka eey
4 Noocyada daboolka kursiga baabuurka eeyaha
4.1 Daboolka guud
4.2 Kursiga badbaadada
5 Waa maxay ilaaliyaha kursiga gaariga ee wanaagsan waa inuu u ekaadaa
6 Meesha laga iibsado ilaaliyaha kursiga gaariga eey
Ilaaliyeyaasha kursiga ugu fiican ee baabuurta
Halkaan waxaa ah xulashada ilaaliyaasha kursiga gaariga ee lagu taliyay eeyaha si looga hortago timaha iyo wasakhda kale inay wasakheeyaan dahaarka gaarigaaga:
Daboolida Kursiga AMZPET ...
Kiiska Eyga Pecute ...
Ma loo baahan yahay in la keeno ilaaliye kuraasta markaan eeyga baabuurka ku wadno?
Runtu waxay tahay inay lagama maarmaan tahay ama aad loogu taliyay. Ma aha inaan ka fikirno kaliya markaan safarada dhaadheer sameyneyno, laakiin haddii aan dooneyno inaan meel isaga lugeyno meel oo aan u baahanahay inaan baabuurka qaadno, durba waxay noqon doontaa beddel wanaagsan. Sababtoo ah xayawaanku wuxuu lahaan doonaa booskiisa inta aan si fudud u neefsan karno sidoo kale waxaan sii wadnaa inaan ka fikirno daryeelka baabuurkayaga. Marka waxaan ku dilnaa laba shimbir hal dhagax xagga raaxada iyo waliba nadaafadda.
Inkasta oo dhinaca kale, ay jiraan dad badan oo doorbida inay adeegsadaan sidaha ama kuraasta hore loogu talagalay oo si fudud loogu dhejiyo baabuurka. Hab lagu hubiyo in wadistu ay noqon doonto mid kaamil ah, iyada oo aan la jeedin.
Faa'iidooyinka isticmaalka daboolka baabuurka eey
Wuxuu ururin doonaa timaha oo dhan taasi way dhici kartaa waxayna ka hor istaagi doontaa inay ku dhegaan kursiga.
Waxay siisaa raaxo xoolaheena maxaa yeelay badiyaa waxay leeyihiin taabasho jilicsan ama suuf fudud.
Haddii socodsiinta adiga iyo xayawaankaaga xayawaanka ahi ay ku jireen baadiyaha ama biyo u dhow, waxaad ka ilaalin doontaa wasakhda gaariga maadaama ay noqon doonto kiiska soo jiita.
Sidoo kale, wuxuu ka ilaaliyaa baabuurka qoyaan, oo ka hortagaya in kuraasta la dhaawaco.
Iyadoo aan la ilaawin ur. Sababtoo ah inta badan waa wax caadi ah oo sababtan awgeed, had iyo jeer way ka fiican tahay in lagu sii jiro daboolka marka loo eego kuraasta.
Faa'iido kale ayaa ah in ay yaraan doonaan xagashada baabuurka.
Waxay badanaaba haystaan ​​jeebado ama qaybo aad ku kaydin karto qalabka lagama maarmaanka u ah xayawaankaaga.
Noocyada daboolka kursiga baabuurka eeyaha
Waa dabool asaasi ah oo aad si raaxo leh ugu dhejin kartid kuraasta. Ma iloobin in sidoo kale ay jirto ikhtiyaarka jirridda. Waa dabool ballaaran oo ay tahay inaan furno si aan u daboolno qeybta uu xayawaankayagu ku safri doono. Laakiin haa, waa inaan si fiican u qabannaa si uusan u dhaqaaqin. Waayo, badiyaa waxay leeyihiin suumanka lagu dhejin doono timaha madaxa. Aqlabiyaddu sidoo kale waxay leedahay furitaanno taxane ah oo suunka kursigu ku xidhan yahay.
Haddii aadan rabin dabool buuxa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in eygaagu yar yahay ama xanaaqsan yahay, markaa waxba ma aha sida kursiga baabuurka. Nooc kursi shaqsi ah laakiin taasi waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa sofasyada gaariga. Waxay la mid tahay kuraasta ilmaha laakiin kiiskan xayawaankayaga. Xusuusnow in ay tahay inaad si fiican u xajisato oo mar haddii aad qabato, waxay sidoo kale leeyihiin suun u eg suunka si loogu xiro. Sidaas ayaan uga fogaan karnaa waxyaabaha carqaladeeya ee giraangiraha u noqon kara masiibo. Caadi ahaan waxay yihiin kuwo aan biyuhu lahayn oo leh mesh dhammaystiran si ay u helaan neefsasho fiican.
Waa maxay ilaaliyaha kursiga gaariga ee wanaagsan waa inuu u ekaadaa
Iska caabin: Adkaysi marka aan ka hadlayno xayawaanka aad bay muhiim u tahay. Sababtoo ah waxaan ognahay in eeyaha oo dhami aysan si siman u xasilloonayn taasina waa sababta aan u raadin doonno agab taageeraya adeegsiga iyo xitaa cidiyaha dhallaankayaga dhogorta leh. Inta badan moodooyinka qaab ilaaliyaha kursiga gaariga eey, wuu yimaadaa taasina waxay u saamaxaysaa inay yeelato iska caabin fiican.
Biyo ma galeen: Si aad uga fogaato dhibaato kasta oo ku soo gaadhi karta safarka, mar walba waa lagu talin karaa hubso in ilaaliyaha uusan biyuhu ahayn. Ma aha oo kaliya baahidaada jir ahaaneed, laakiin sababta oo ah waxaad ku geli kartaa baabuurka iyadoo lugahaagu wali qoyan yihiin taasina waxay sababi doontaa in qoyaanku sii joogo kursiga, oo uu kharribo waqti ka dib. Sidaa darteed, wax walbaa waxay ku jiri doonaan kiiska iyadoon dhibaato weyn jirin.
Iyada oo leh godad si aad uga gudubto suunka eyga: Badanaa way keenaan, sababtoo ah habkaas ayaan u hubinnaa raaxada weyn marka aan safrayno. Laakiin ma dhibayso inaad hubiso inay haa tahay wuxuu leeyahay daloollo ama daloollo. Sababtoo ah waxay joogi doontaa meesha laga gudbo suumanka ama taageerooyinka ka dhigaya xayawaankayaga inuu si fiican u taageero.
Iyada oo la xakameeyo madaxa: Si looga hortago in dabooluhu ku dhaqaaqo dhaqdhaqaaqa baabuurka ama kuwa xayawaankayaga rabaayada ah, waa inay sidoo kale lahaadaan nooc barroosinno ah, oo ah qaablo dhaadheer, oo waxaa lagu dhejin doonaa dhafoorka madaxa. Iyada oo ku xidhan qaabka daboolkayaga, waxay ku dhegi karaan oo kaliya dhabarka ama sidoo kale kuwa hore.
Diidmada: Ka sokow ka fekerka si sahlan loo nadiifin karo, si khafiif ah loo sudhay oo dabool leh ama dabool leh, mana iloobi karno in aysan ahayn siibasho. Sababtoo ah habkan waxaan hubin doonnaa in xayawaankeenna uusan siibmin ama u dhaqaaqin inta safarka lagu jiro. Tani waxay ka dhigi doontaa mid aad u raaxo badan dabcan, sidaas ayaan yeeli doonnaa maxaa yeelay waxaan xoogga saari doonnaa waddada.
Meesha laga iibsado ilaaliyaha kursiga gaariga eey
Amazon: Mar labaad, Amazon waxay na siisaa dhammaan noocyada daboolka ama ilaaliyaha kursiga gaariga eeyaha. Iyada oo leh dhammaystir adkaysi leh, fududahay in la nadiifiyo oo gabi ahaanba ku habayn doonta baabuurtaada. Waxa intaa dheer in sharad lagu galo nabadgelyada oo kaliya ma aha daboolladaan laakiin sidoo kale kuraasta xoojiyaha.
Kiwoko: Dukaanka ku takhasusay xayawaanka ayaa sidoo kale bixiya xulashooyinka ugu fiican oo ah ilaaliyayaal dhammaystiran oo lagu dhejin doono kuraasta, sida kuraasta, si loo qaado xayawaanka aadka loo ilaaliyo. Waxaad ku raaxeysan kartaa dhowr fursadood iyadoo ku xiran baahidaada.
Decathlon: Dukaanka isboortiga si heer sare ah waxay sidoo kale meel bannaan u dhaafeen xayawaankayaga halkaasna waxaan ka heli karnaa noocyada kala duwan ee sidayaasha, si xayawaankeenna mar walba si wanaagsan loo ilaaliyo.
Lidl: Dukaan -weynahaan mar walba wuxuu doortaa qalabka guriga iyo kuwa xayawaanka rabaayadda ah. Markaa kiiskan, waxaan haysannaa ikhtiyaarka ah inaan helno dabool kursi oo fudud oo ka hortaga timaha kursi -fadhiga ama toos u aadi doona daboolka ku -jaban ee rabaayadda.
isgoyska: Carrefour waxay leedahay mid ka mid ah daboollada ugu raqiisan waxayna leedahay suumanka si loo helo taageero wanaagsan. In kasta oo ay run tahay inay leedahay dhowr nooc oo dhammaantood ay leeyihiin dhammayn biyo -celin iyo adkaysi leh. Maxaan kaloo weydiisan karnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Ilaaliyaha kursiga gaariga eey